Izabelo zeSemalt IiSahlulo ezili-10 zeeWebhu zokuCoca izixhobo zoLungiselelo
kwiimeko ezahlukileyo, ukukhangela idatha ebalulekileyo kubaphathi bewebhu, abaphengululi, intatheli, abaprogram, abaphuhlisi kunye neeblogi. Banceda ukuthayipha idatha kumaphepha amaninzi ewebhu kwaye zisetyenziswa kakhulu ngamashishini nakwiifom zecandelo lokuphangela. Ziye zisetyenziselwa ukutshiza idatha kwiifowuni zeefowuni kunye ne-imeyile evela kwiindawo ezahlukeneyo. Nangona ukhona ekuthengeni kwaye ufuna ukulandelela amaxabiso eemveliso ezahlukeneyo, ungasebenzisa izixhobo zokucoca zewebhu kunye nezicelo.
1. I-Cloud Scrape okanye i-Dexi - sharepoint app hosting.io
I-Cloud Scrape okanye i-Dexi.io isekela ukuqoqwa kwedatha kumaphepha ewebhu ahlukileyo kwaye ayifuni ukukhutshelwa kwisixhobo sakho. Kuthetha ukuba esi sixhobo sinokufikelela kwaye sisetyenziswe kwi-intanethi kwaye sinomhleli obanzi-wesiphequluli esekelwe ukufumana izinto ezenzelwe wena. Idata ekhishiwe ingagcinwa kwiifom ze-CSV ne-JSON, kunye ne-Box.net kunye neGoogle Drive.
Yisistim esisekelwe kwifu kunye nesicelo sokukhutshwa kwedatha. Oku kuvumela ukuba abathuthukisi kunye ne-webmasters bafake idatha efanelekileyo kunye neenkcukacha ngemizuzwana. I-Scrapinghub isetyenzisiwe ngababloki beefayile kunye nabaphandi ngoku. Iqukethe i-rotator proxy evolonti, inika inkxaso kwi-bots ezimbi kwaye ichonga indawo yonke kwisithuba seyure.
Inxalenye engcono kakhulu yeVisualScraper kukuba le nto ithumela idatha kwiifom ezifana neSQL, XML, CSV, kunye ne-JSON. Ngenye yezona zinto zipholileyo kwaye zisebenzisekayo ukucoca izicelo kwi-intanethi kwaye unceda ukukhenkotha uze ulithathe ulwazi ngexesha langempela. Isicwangciso seprayimenti siya kukuhlawula i-$ 49 ngenyanga kwaye ikuvumela ukuba ufinyelele kuma-100k makhasi.
Yayaziwa kakhulu ngomakhi wayo we-intanethi kwaye iifomathi zedatha ezahlukeneyo zabasebenzisi. I-Import.io ithumela idatha ukusuka kumaphepha ewebhu ahlukeneyo kunye nokuthumela ngaphandle iifayile ze-CSV. Kuyaziwa ngobuchwepheshe bayo obuphambili kwaye banako ukufumana izigidi zamaphepha ngosuku. Ungalanda kwaye usebenze ukungenisa.io ngaphandle kweendleko. Iyahambelana ne-Linux kunye ne-Windows kwaye ivumelanisa ii-akhawunti ze-intanethi.
Ngenye yezona zicelo zedatha yokucoca. Esi sixhobo sinika ufikelelo olulula kunye oluchanekileyo kwi-data echanekileyo kunye nexesha langempela kwaye likhawuleza iphepha lewebhu. Ingakufumana iziphumo ezifunayo kwiilwimi ezingaphezu kwe-200 kwaye igcina iziphumo kwiifom ze-XML, ze-RSS kunye ne-JSON.
Ivumela ukuba silandele yonke iwebhusayithi, ii-blogs, ii-media media, i-ATOM okanye i-RSS feeds. Igcina idatha kwifomathi efundekayo neyiyokekayo, ngokubonga kwi-API yomlilo yokulawula iindlela ezininzi zeenkcukacha kunye nokukhusela okuphambili kogaxekile . Inceda ukulahla ugaxekile kwaye ukhusela ukusetyenziswa kolwimi olungalunganga, ukuphucula umgangatho wedatha yakho nokuqinisekisa ukhuseleko lwayo.
8. I-Hub ye-OutWit
I-add-on eyaziwayo ye-Firefox eneempawu ezininzi kunye neenkcukacha zokukhutshwa kwedatha. Phuma kungekudala nje ukukhangela idatha kodwa izitye kwaye zikhawulele umxholo wakho ngendlela efanelekileyo nefanelekileyo. Unokwenza uphawule naluphi na uhlobo lwephepha lewebhu ngaphandle kwanoma yimfuneko yikhowudi.
Yenye enye inamandla kwaye iyamangalisa i-web-crawler kunye ne-data scraping application. I-80legs isixhobo esinokuguquguqukayo esilungiselela iimfuno zakho kwaye sithatha ezininzi iinkcukacha ngokukhawuleza. Le web scraper iye yahluma ngaphezu kwezi-600,000 kwizikhundla ngoku kwaye isetyenziswe ngamaqhwa njengePayPal.
I-scraper isandiso se-Chrome esidumileyo nesiluncedo kunye neendawo ezininzi zokukhutshwa kwedatha kwaye yenza lula uphando lwakho lwe-intanethi. Idlulisela idatha echanekileyo kwiimashishini zeGoogle kwaye ifanelekile kubaqalayo kunye neengcali. Unokwenza lula ukukopa idatha kwiibhodi ze-clipbo kunye ne-Scraper eyenza i-XPath encinci ngokusekelwe kwiimfuno zakho.